फारमहरू र डाटाबेस तालिकाहरूमा, तपाईँंले डेटा फाँटहरय, सूची बाकसहरू बाट खोज्न सक्नुहुन्छ र विशेष मानहरूका लागि बाकसहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।.
रेकर्ड प्रतिमा तालिका डेटा पट्टीमा र फारम डिजाइन पट्टीमा रेकर्ड फेला पार्नुहोस
यहाँ वर्णन गरिएको खोजी LibreOfficeद्वारा ल्याइएको हो । यदि तपाईँले डाटाबेसमा खोजी गर्नका लागि SQL सर्भर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईँले फारम आधारित फिल्टरहरू प्रतिमालाई फारमपट्टीमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
तपाईँंले तालिका वा सूत्र कागजात खोल्दासम्म तपाईँंको खोज टर्महरू बचत हुनेछन, यदि तपाईँंले एक भन्दा बढी खोज चलाईरहनुभएको छ भने र तपाईँंले खोज टर्मलाई दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ भने,तपाईँंले कम्बो बाकसका लागि पहिलेनै प्रयोग गरिसकेको खोज टर्म चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँं सँग एउटा डेटा फाँट छ,जुन "DD.MM.YY" ढाँचामा डाटाबेसमा बचत गरिएको छ(उदाहरणका लागि, १७.०२.६५)। प्रविष्टिको ढाँचा डेटा स्रोतमा दृश्यबाट "DD. MMM YYYY" (१७ फेब्रुअरी १९६५)मा परिवर्तन भयो। यो उदाहरणलाई पछ्याउदै, फेब्रुअरी १७ समाविष्ट भएको रेकर्ड फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस विकल्प खुल्ला गरेरा मात्र पाईयो।
"5" फर्कियो "14:00:00" समयको रूपमा
फाँटहरू dBase डाटाबेसका लागि परिभाषित गरिँदैन र झुठा हुनै पर्दछ। समय "14:00:00"आन्तरिक तरीकाले प्रदर्शन गर्नका लागि,एउटा ५ आवश्यक हुन्छ।
"00:00:00" मानक मिति फाँटको सबै रेकर्डहरू फर्काउँदछ।
आन्तरिक रूपले वर्णन गरिएकोले देखाईएको दृश्य मिल्दैन। उदाहरणका लागि, यदि मान ४५.७८९ डाटाबेसमा टाइप नम्बर/द्विगुनाको फाँटको रूपमा सङ्ग्रह गरिएमा र देखाईको ढाँचा दुई दशमलव मात्र प्रदर्शन गर्नका लागि सेट गरिएमा,"45.79" फाँट ढाँचा सँग खोजहरूमा फर्किन्छ।
यधपी,कुनै ढाँचा विषयहरू बाहेक ठुला डाटाबेसहरूका लागि फाँट ढाँचा लागू गर्नुहोस बिनाको खोज उपयुक्त हुन्छ,किनकि यो छिटो छ।
तपाईँंले निम्न वाईल्डकार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
यदि तपाईँंले वास्तविक क्यारेक्टरहरूका लागि खोज्न चाहनुहुन्छ भने? वा * ,तिनीहरूलाई एउटा backslash: "\_?" वा "\_*" ले भुमिका बाध्नुहोस।यधपी, यो वाईल्डकार्ड अभिव्यक्ती सक्षम पारिएको बेलामा मात्र आवश्यक हुन्छ। जब विकल्प सक्षम पारिदैन,वाईल्डकार्ड क्यारेक्टरहरू सामान्य क्यारेक्टरहरूको रूपमा प्रक्रिया गरिन्छन।
नियमित अभिव्यक्तीहरू सँग खोज्दछ। यहाँ समर्थन गरिएका उस्तै नियमित अभिव्यक्तीहरू LibreOfficeसंवाद फेला पार्नुहोस र बदल्नुहोसमा पनि समर्थन गरिन्छन।
निकै ठुलो डाटाबेसहरूमा, उल्टा खोज क्रममा रेकर्ड फेला पार्न केही समय लिन सक्दछ। यो अवस्थामा, स्थितिपट्टीले तपाईँंलाई रेकर्डहरू अहिले पनि गिन्ति हुदैछन भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछ।